Ihe omuma banyere ihu igwe nke igwe ato | Network Meteorology
Anyanwụ atọ na mbara igwe!
Anyanwụ atọ dị na Russia
Mba, anyị anaghị ekwu maka anwụ abụọ pụtara, mana gbasara ihe omuma banyere ihu igwe nke na eme otutu oge ma, o sina dị, ọ na-apụtaghị nke ọma ebe ọ bụ na, dị ka anyị si mara, mmadụ ekwesịghị ile kpakpando nke anyanwụ anya ozugbo ọ ga-emebi anya anyị.
Anyanwụ atọ bụ otu ihe atụ ọzọ nke otu ọdịdị si dị egwu, na ... dịkwa ka ikike nke echiche mmadụ si dị ike, nke nwere ike ime ka anyị kwenye na ụgbọ mmiri ndị ọzọ na-abịa eleta anyị. N'ezie, ọ bụ echiche kachasị mma maka ọtụtụ n'ime anyị (gụnyere mụ onwe m), mana ọ dị nwute na ọ bụghị. Otú ọ dị, Ọ ka bụ ihe ngosi dị egwu nke na-adọta uche anyị n'ụzọ dị ike.
N’ime igwe ojii, ọtụtụ obere kristal ice dị. Ìhè anyanwụ, mgbe ọ na-adaba na ha, na-emepụta mmetụta anya a na-akpọ parhelion nke na-eme ka anyị chee na kpakpando ahụ baa ụba.. Ọ bụ ezie na nke kachasịkarị bụ na »anwụ abụọ ndị ọzọ» pụtara 22º pụọ n'akụkụ abụọ nke Sun (dị ka ị pụrụ ịhụ na foto ahụ na-achị isiokwu ahụ), ha nwekwara ike ịbịaru nso, na-akpụ ụdị triangle nwere obere obere ịdị elu.
Mgbe ụfọdụ ha na-esonyere ihe a maara dị ka halos, nke na-echetara egwurugwu nke yiri ka ọ gbara anyanwụ gburugburu ma mekwaa n'otu ụzọ ahụ isi mmetụta nke isi taa. Ndị a pụtara na mpaghara oyi nke ụwa, mana ọ bụrụ na mpaghara gị n'oge oyi oge okpomọkụ dị oke ala, ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ịma mma ha.
okirikiri ọkụ n'isi
A na-ese foto anyanwụ atọ n'akụkụ ụwa dị iche iche, n'etiti ndị ọzọ: Argentina, China na ọtụtụ akụkụ nke Europe. Oge ikpeazụ bụ na obodo Russia nke Chelyabinsk na February 17, ebe ijide n'aka na o juru ha anya ịhụ ha.
Gị onwe gị, ọ dịtụla mgbe ị hụrụla ihe ịtụnanya a? Kedụ ihe ị chere maka ya?
Anyanwụ atọ na China
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Anyanwụ atọ na mbara igwe!
Ignacio Pasrano dijo
Disemba 16, 2015 na awa nke ụtụtụ hụrụ nke a na steeti ebe nkezi okpomọkụ kwa afọ dị n'etiti 23 Celsius ruo 30 Celsius, a hụrụ anyanwụ atọ ahụ yana egwurugwu agbanweela
Zaghachi ka ọ bụrụ ignacio pasrano
Carlos Casas dijo
August 05, 2016 ihe ngosi nke parhelion gosipụtara n'obodo Plato Magdalena (Colombia) na anyị nọ nso mpaghara Equatorial nke dị obere ịhụ ihe ngosi a, mana mara mma
Zaghachi Carlos Casas
Echere m na ụgbọ mmiri ndị ọbịa enweghị ihe ọ bụla gbasara isiokwu a ma hụ na ha adịghị adị, ị ga-emegherịrị ohere niile, ma ọ bụghị nke ọma.
Kedu ka esi atụpụta ikuku ikuku
Ọkụ nke San Telmo: gịnị bụ ihe ahụ?